लियोनल मेस्सीबारे २० रोचक तथ्य
उमेरले ३१ वर्ष लागेका लियोन मेस्सीले क्लब तहमा रहेर सबै खाले उपाधिहरु लगभग जितिसकेका छन् । उनले बार्सिलोनामा नै रहेर आफ्नो करिअर बिताउने निर्णय समेत गरेका छन् ।
बार्सिलोनामा आएपछि उनले ९ वटा लिग उपाधि ५ वटा कोपा डेल रे, ७ वटा सुपर कोपा डे इस्पानिया, ४ वटा च्याम्पियन्स लिग, तीनवटा युइएफए सुपर कप र तीनवटा फिफा क्बल वल्र्ड कप उपाधि जितेका छन् । उनको नाममा ३९ वटा रेकर्ड दर्ता छन् ।
१. लियोनल मेस्सीको जन्म सन् १९८७ को जुन २४ मा अर्जेन्टिनाको रारियो क्षेत्रमा भएको थियो । ११ वर्षको कलिलो उमेरमा उनको डाइगनोसिस गरिएको थियो । उनीमा उचाइ नबढ्ने समस्या देखिएको थियो ।
हर्मन डिफिसेन्सी सिन्ड्रोमबाट उनी ग्रसित थिए । उनको उपचारका लागि प्रत्येक महिना ९०० डलर खर्च आवश्यक पथ्र्यो जुन उनको परिवारले जुटाउन सकिरहेको थिएन । तर, यस्ता समस्या र कठिनाइकाबिच उनले फुटबलका कला कौशल सिक्न प्रयास गरिनै रहे ।
अन्ततः विश्वकै सर्वोत्कृष्ट खेलाडी बन्न सफल भए । फुटबलको ट्रिक्समा माहिर मानिएका मेस्सीलाई आर्सनल जस्तै भएको मानिन्नछ ।
एक जनाले निकै धेरै खेलाडीहरुलाई छलाएर गोल हान्न सक्ने खुबी उनीमा थियो र उनले विभिन्न खेलमा प्रमाणित समेत गरेका छन् ।
२. सायद कमैलाई थाहा छ लियोनल मेस्सीको मिडल नेम पनि रहेको छ । विश्वकै सर्वोत्कृष्ट खेलाडीको मिडल नेम ‘एन्ड्रिस’ हो ।
यो नाम उनलाई उनको पिताले दिएका हुन् । यो नाम दिनुमा परिवारका सदस्यहरुको आफ्नै मान्यता रहेको छ ।
उनीहरुका अनुसार मेस्सीका पुर्वजहरु इटालियनबाट बसाइ सरेर अर्जेन्टिनाको रोसारियो क्षेत्रमा आएका थिए । मेस्सीको यस नामबारे कमैलाई थाहा छ । उनको पुरा नाम लियोनल एन्ड्रिस मेस्सी हो ।
३. लियोनल मेस्सीबारे एउटा स्ट्राइकिङ तथ्य रहेको छ । उनी विश्वकै चर्चीत होचा स्टाइकरमा गनिन्छन् । उनको उचाइ १।६९ मिटर रहेको छ ।
उनको शरिरको उचाइ अन्य फुटबल खेलाडीहरुलाई लिएर तुलना गर्ने हो भने मेस्सीले शक्तिशाली डिफेन्सलाई कडा चुनौती दिने गरेका छन् । धेरै डिफेण्डरहरु लियोनल मेस्सीलाई रोक्न एकदमै कठिन हुने बताउँछन् ।
फुटबललाई आफ्नो खुट्टामा राखिराख्न उनी विभिन्न ट्रिकको प्रयोग गर्छन् । अन्य खेलाडीहरुको जस्तोसुकै चुनौतीलाई पनि मात दिन उनी तयार रहेका हुन्छन् ।
४. लियोनल मेस्सीले आफ्नो फुटबल करिअर ‘निवेल्स ओल्ड बोएज फुटबल क्लब’ बाट सुरु गरेका हुन् । उनले सन् १९९५ देखि २००० सम्म उक्त क्लबमा रहेर फुटबल खेलेका थिए ।
त्यसपछि उनले फुटबल क्लब बार्सिलोनामा आवद्ध भएका थिए । निकै कलिलो उमेर बार्सिलोना क्लबमा आवद्ध भएका मेस्सीको कला कौशल देखेपछि उनको उपचार खर्च समेत व्यहोर्ने सहमतिमा उनी बार्सिलोना क्लब गएका थिए । न्यापकिन पेपरमा उनले पहिलो कन्ट्रयाक गरेका थिए ।
६. सन् २००९ मा लियोनल मेस्सीले पहिलो ‘फिफा वल्र्ड प्लेयर अफ दि इयर’ जितेका थिए । त्यस समय उनी २२ वर्षका थिए । उनले त्यसपछि लगातार तीन वर्षसम्म अवार्ड जिते ।
लगतार चार वर्षसम्म अवार्ड जित्ने उनी पहिलो खेलाडी बन्न सफल भए । धेरै फुटबल पण्डितहरुले उनलाई फुटबल जगतकै सर्वोकृष्ट खेलाडी बताएका थिए ।
७. २४ वर्षको उमेरमा उनी बार्सिलोना क्लबको सबैभन्दा धेरै गोल गर्ने खेलाडी बन्न सफल भए । क्लब इतिहासमा नै सबैभन्दा धेरै ह्याट्रिक गर्ने खेलाडी समेत उनी बने ।
उनको खेल्ने शैली र मुभमेन्टका कारण सबै फ्यानहरु प्रभावित भएका थिए । उनीमा दुवै खुट्टाले गोल गर्न सक्ने क्षमता रहेको छ । उचाइ कम भए पनि उनीमा हेडिङमार्फत गोल गर्ने कला रहेको छ ।
१०. लियोनल मेस्सी चार सिजन लगातार च्याम्पियन्स लिगमा टप स्कोरर रहेका छन् । युरोपका प्रतिष्ठित क्लबहरुको प्रतिष्पर्धा रहने यस लिगमा डिफेन्स उत्तिकै बलियो हुने गर्छ ।
त्यस्ता बलिया क्लबहरुको डिफेन्स लाइन चिर्दै उनले लगातार चार वर्षसम्म टप स्कोरर भएर देखाइदिए । लिगमा मात्र नभई च्याम्पियन्स लिगमा पाएको सफलताले पनि उनलाई विश्वकै सर्वोकृष्ट खेलाडी भएको पुष्टि गर्छ ।
१३.सन् २००८ मा बेइजिङमा भएको ओलम्पिकमा अर्जेन्टिनालाई गोल्ड मेडल दिलाउन उनी सफल भएका थिए ।
१४.१९ नम्बरको जर्सी लगाउने मेस्सीले सन् २००८ बाट १० नम्बरको जर्सी लगाउन थाले । त्यस अघि बार्सिलोनामा १० नम्बर जर्सी लगाएर खेल्ने खेलाडी रोनाल्डिनो थिए ।
१७.कन्ट्रयाक र इण्डोर्समेन्टबाट उनले दैनिक १ लाख २८ हजार डलर कमाउने गर्छन् ।